“Njengodokotela nomcwaningi ozinikele emkhakheni weComprehensive Medicine, benginombono wohlelo lokusebenza olusha lwe-iPhone oluzoletha imininingwane ebalulekile ngempilo yemvelo nemithi kuzethameli ezibanzi. Umbono wami "Wokwelashwa Kwemvelo" wawucacile, kepha ngangidinga iqembu ukuze ngikufeze. Ngithole uPlum Amazing futhi angikwazi ukweqisa umsebenzi omkhulu abasenzele wona! Baklama isoftware futhi bekuyincomo ephelele kuthimba lethu - inolwazi futhi iyaphendula futhi basebenze eduze nathi ukuguqula umbono wethu ube ngumkhiqizo oqediwe osezingeni eliphezulu. Ngincoma kakhulu uPlum Amazing kunoma ngubani ofuna izinsiza zokwakha, zokuthuthukisa nezinhlelo zemakethe yohlelo lokusebenza lwe-iPhone. ”
- UJacob Teitelbaum, MD, uMdali Wezokwelapha AZ App.
Enye yezinhlelo zokusebenza ze-iOS zokuqala ezinokulandwa okungu-1,000,000+.
Ngibe nenjabulo yokusebenzisa iPlum Amazing ukudala uhlelo lokusebenza lwe-iPhone lesiteshi sami somsakazo i- “The MIXX”. Esinyathelweni ngasinye kusuka entuthukweni yokudala, ukulungisa iphutha, nokulethwa kokugcina ku-Apple, iPlum Amazing ibikhona lapho ingigcina ngisesikhathini. Ukwenza isinqumo sokuthi iyiphi injiniyela engayisebenzisa kungaba nzima. Ngenze ukukhetha okulungile ngePlum Amazing. Ngiyabonga Bafo!
Imenenja, Isiteshi Somsakazo se-MIXX
“UPlum Amazing, usisebenzele iphrojekthi ye-iPhone yethu yakamuva. Bayazazi izinto zabo, bakulungele ukusebenzisana nabo, futhi bangahola kalula iphrojekthi kusuka ekukhulelweni kuze kube sekuqedeni. Angikwazi ukubancoma ngokwanele uma ufuna ukwesekwa kwe-Objective-C noma iCocoa dev. ”